तपाईलाइ थाहा छ ? बुढी औलाले बताउछ तपाईको स्वभाव कस्तो छ ! हेर्नुहोस् शास्त्रले यसो भन्छ « Light Nepal
तपाईलाइ थाहा छ ? बुढी औलाले बताउछ तपाईको स्वभाव कस्तो छ ! हेर्नुहोस् शास्त्रले यसो भन्छ
Published On : 8 September, 2017 8:15 pm
यदि हामी ज्योतिष शास्त्रलाई मान्ने हो भने हाम्रो शरिरको विभिन्न अंगहरुले तपाईको सोच तथा बानिहरु थाहा पाउन सकिन्छ । त्यस्तै हत्केलामा भएका बिभिन्न रेखाहरुले पनि व्यक्तिको बारेमा बताइरहेको हुन्छ । यस्तै कुरालाई बिश्वास गर्ने व्यक्तिहरु विभिन्न ठाउँमा हेराउन गइरहेको देख्न पाउँछौ ।
कसैले यस्ताकुराहरुलाई वाइयात हो भनेपनि बिश्वमा विकशित मुलुकहरुमा पनि यस्ता कुराहरुलाई विश्वास गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यहाँ एक भिडियोमा तपाईको बुढी औलाको आकार कस्तो छ । सो अनुसारको फल तथा मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु बताइएको छ ।
हेर्नुहोस् तपाई पनि तपाईको औला अनुसार तपाईको स्वभाव कस्तो छ त
१, सिधा बुढी औला
आफ्नो जीवनको एक मिनेट पनि खेर जान दिदैन। देखाउनको लागि कसैलाई पनि सहयोग गर्दैन्। यदि कसैले मग्न आएमा अस्विकार पनि गर्दैनन। काम नगर्ने कुरा मात्र गर्ने यस्ता मान्छे उनिहरुलाई पटक्कै मन पर्दैन। उनीहरुको बैबाहिक जीवनमा श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध एकदम राम्रो हुन्छ।
बच्चा पनि राम्रो हुन्छन। तर आफन्त साथी भाई संग भने सम्बन्ध नराम्रो हुन्छ किनकि प्राय मान्छेहरु उनलाई एकदम स्वार्थी ठान्छन। आफ्नो समस्या कहिले अरुलाई नसुनाउने भएका कारण यस्ता व्यक्तिलाई साथी भाई आफन्तले नराम्रो मान्ने गर्छन।
२, अलि कति बांगो बुढी औला
यदि जीवनमा जिन्दगीको अरुबाट मज्जा लिन मन छ भने यस्ता मान्छेको संग जानुहोस्। यस्ता मान्छे आफ्नो काम गर्न मन पराउछ। यदि काममा गए पनि त्यहा सबैको मन जित्न सफल हुन्छन। हरेक काममा सकरात्मक सोच लिन्छन। बैबाहिक जीवन एकदम सुखमय हुन्छन।
तर नोकरीको मामिलामा भने अलि अफ्ट्यारो पैदा हुन्छ। उनीहरु इमान्दारीले भरिपूर्ण हुन्छन। जीवनलाई गम्भीर रुपमा सोच्छन। नोकरीमा टिकिरहन उनलाई गाह्रो हुन्छ। तर व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेमा एकदम लाभ उठाउन सक्छन। एकदम दयालु हुन्छन।
यदि कसैले सहायोग मागेमा आफुसंग नभएपनि अरु संग मागेर भए पनि दिन तयार हुन्छन। आमा, बुबालाई एकदम माया गर्छन। घर व्यबस्थापन एकदम राम्रो तरिकाले गर्ने गर्छन।यिनीहरुको जीवनमा पैसाको कमि हुदैन। जीवनको अन्तिम पल एकदम सुखमय हुन्छन।
३, पुरै बाङ्गिएको बुढी औला
यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक एकदम फाप्छ। ठुलो मान्छे बन्ने सम्भाना हुन्छ तर जीवनमा आर्थिक समस्या भने आइ परिरहन्छ। यस्ता समस्या आइ परे पनि समस्या समाधान गर्न सफल हुन्छन। एजेन्सीको सहयोगमा हामीले गोर्खाली खबरबाट साभार गरेका हौ
मोदीका कारण जनकपुरमा चमत्कार, २० वर्षमा नभएको काम १० दिनमा पुरा
जनकपुर, २५ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने कुराले जनकपुरमा चमत्कार भएको छ ।
काठमाडौं, १० बैशाख । अब केही समयमै नेपालबाट अब बस चढेर सीधै बंगलादेश पुग्न सकिने
डोजर देख्दा घर भत्काउने नाटक नत्र चुपचाप
बुटवल, ७ बैशाख । बुटवलका व्यवसायीक संघसंस्थाहरुको आग्रहमा सडक सिमा मिचेर बनाईएका घरटहरा हटाउन एकसाताको
एनएमसी द्धारा वृद्धवृद्धा र अनाथ बालबालिकाहरुलाई सहयोग
सुनिल रेग्मी नेपालगञ्ज, चैत्र २३ हाम्रो अभियान समाजिक उत्तरदायित्व भन्ने नाराका साथ आर्दश ग्रुप द्धारा